Robit olandela ukukhula jikelele
ixesha Post: 06-06-2018
Robit wathi lo ngokubonakalayo kuya kusenza ummandla wayo zoshishino DTH, kunye ekuthengeni ezimbini, intengiso net ezongezelekayo yenkampani uya kuba mkhulu € 75 million (US $ 83 million). Ngokutsho Robit, ezi zinto zifunwayo ziza ziyinxalenye ebalulekileyo kwisicwangciso yayo ekukhuleni kwehlabathi, kwaye looki ...Funda ngaphezulu »
Le nkampani ithe nyathelo liza kwandisa ukusebenza nokomeleza kwinkampani elizayo. Atlas Copco kuzakuvala indawo yayo e Shenyang, leyo silwenza izilumkiso iliwa becala ngesandla-zigcinelwe lezemigodi kunye nolwakhiwo, amaNgqina efudukela imisebenzi kwisityalo Zhangjiakou. E Shenyang, malunga 225 pe ...Funda ngaphezulu »
Le nkampani yathi ekukhangeleni iindlela ezizezinye kunezo ngobuchule iya kuvumela ukuba sigxininise kwezo iimveliso kunye zinakho ukukhula. Caterpillar wongezelela ukuba inkampani kunye nabathengisi balo zisahleli zizibophelele kubathengi ezikhoyo yaye ziya kuxhasa ezo igumbi kunye intsika ulandelele drill mabutho ngoku ...Funda ngaphezulu »